Kitra – «Telma coupe de Madagascar 2018»: tafita ny Adema averina ny lalaon’ny Elgeco sy ny Cnaps | NewsMada
Kitra – «Telma coupe de Madagascar 2018»: tafita ny Adema averina ny lalaon’ny Elgeco sy ny Cnaps
Ny ekipan’ny As Adema aloha hatreto no efa nahazo ny tapakila, hiatrehany ny famaranana, hiadiana ny amboaran’i Madagasikara “Telma coupe de Madagascar”, taranja baolina kitra. Averina kosa ny lalaon’ny Cnaps sy ny Elgeco Plus
Averina amin’ny fotoana manaraka fa tsy tontosa hatramin’ny farany, ny lalaon’ny Elgeco Plus sy ny Cnaps Sport, teo amin’ny manasa-dalana, hiadiana ny amboaran’i Madagasikara “Telma coupe de Mada”. Fihaonana, notanterahina, omaly alahady, tetsy amin’ny kianja Mahamasina. Nisaraka ady sahala, 1 sy 1 mantsy ny roa tonta, tao anatin’ny 90 mn nilalaovana sy ny fanalavam-potoana, 15 mn indroa miditra. Tokony hiditra teo amin’ny fandakana ny “tirs au but”, saingy maizina ny andro ka tsy azo notanterahina izany. Miandry ny fanapahan-kevitry ny federasiona, ny fotoana hamerenana ny lalaon’ny roa tonta. Araka ny heno, mety haverina ao anatin’ny 48 ora ny lalao ka avy hatrany dia hiroso amin’ny fandakana ny “tirs au but”, ny roa tonta.
Raha hiverenana, ny Cnaps Sport no nahafaty ny baolina voalohany, tamin’ny alalan’i Tojokely avy eo nosahalain’i Bônara.
Teo amin’ny ankatoky ny famaranana iray indray, nahazo ny tapakila hiatrehana ny famaranana, ny AS Adema, rehefa nandavo ny Uscafoot, tamin’ny isa, tery 2 no ho 1. Efa tany amin’ny fanalavam-potoana ihany koa vao tafita ny ekipan’ny seranam-piaramanidina. Nahafaty ny baolina voalohany ny Adema, tamin’ny alalan’ny “penalty”, tafiditr’i Donah, teo amin’ny minitra faha-70. Nosahalain’i Vévé izany, mbola tamin’ny “penalty” ihany koa teo amin’ny minitra faha-84. Tsy nisy intsony ny baolina maty taorian’io. Voatery niditra tamin’ny fanalavam-potoana ny roa tonta. Teo no nahatafiditra baolina nahazoany ny fandresena, i Fetra, ho an’ny Adema.